लुकाउ कान्छी तिम्रो गहना र सुर्केथैली कोही लुट्न आउँदैछन् ! - Purwanchal Daily
१ आश्विन २०७८, शुक्रबार मा प्रकाशित
लुकाउ कान्छी तिम्रो गहना र सुर्केथैली किनकि कोही लुट्न आउँदैछन् ! हो, छिटो लुकाउ कान्छी तिम्रो गहना र सुर्केथैली कोही लुट्न आउँदैछन् !
हल्ला चलिराछ कान्छी ! आजकाल शहरभरी, गाउँभरी, चौबाटो, चौतारा, सभा र कचहरीभरी वेगले । जो कोही बखान लाउँदैछन् सात समुद्रपारीको कुनै देशले हाम्रो देशलाई डलर दिन्छ रे । धेरैधेरै नेताहरुको त सपना नै बनिसक्यो किनकि त्यो देश जसले नेपाललाई झिलिमिलि पारिदिन्छ रे । उज्यालो बेचेर कुस्त पैसा कमाउँछ रे हाम्रो देशले । अनि त्यो पैसाले हामी नेपाली धनी, सुखी र समृद्ध हुन्छौँ रे । कतिपय नेता, अभियन्ता र बुद्धिजिवी समेतले दिउँसै यस्ता सपना देख्न थालेको धेरै भइसक्यो ।
नेता र अभियन्ताहरुले त जिब्रो लपलपाएका लपलपाएकै छन् किनकि त्यो सुदूर देशले नेपाललाई दिने सहयोग निकै नै मीठो छ रे । अंम्रित भन्दा नि मीठो र टेस्टी । त्यो देशले नेपाललाई गर्ने सहयोग स्वीकार्नेहरुलाई त अर्बपति बनाइदिन्छ रे । अग्रिम बक्सिस पनि दिइसक्यो रे । जनताहरु चाहिँ तिनीहरु अर्बपति भएकै प्रभाव, राप, ताप र हावाले नै करोड पति बन्छन् रे ।
कान्छी ! तिमीले मलाई मुबिलको मुसेजमा लेखेथ्यौ कि, ‘ओइ कान्छा ! अब तेरो माया पनि चाहिएन, कोशेली पनि चाहिएन किनकि अब एमसिसि आउँदैछ अरे । त्यसले हामी नेपाली केटीहरुलाई गरगहनाले झिरिझ्याँट्टै पारिदिन्छ रे । हाम्रो थैलीभरी पैसै पैसा भरिदिन्छ अरे । हामीलाई गोरा केटीहरुजस्तै गोरी गोरी बनाइदिन्छ अरे । अनि के के हो के के थुप्रै थुप्रै कुरा दिन्छ अरे । हाम्रो नेपाललाई सिंगापुर बनाइदिन्छ अरे । त्यसैले कान्छा तेरो केही चाहिन्न मलाई अब ।’
‘हेर कान्छी ! तिमीले मलाई जे भन तिम्रो खुशी । गोरो छाला भएकाहरु पर्न थालेछ । ठीकै छ कान्छी ! तिम्रो जो इच्छा तर तिमीले जुन एमसिसिको कुरा गरेउ नि त्यसले तिमीलाई झिरिझ्याँट्टै चाहिँ होइन झल्लुङ्गट्वाँट चाहिँ अबश्यै पारिदिन्छ । बरु तिमीसँग भएको एकलालको गहना पनि लुटेर लग्ने छन् । तिम्रो सुर्के थैलीमा भएको दुमो पैसा पनि लुटेर लानेछन् । गोरा केटीहरुजस्तो गोरी बन्ने सपना बुन्दै छ्यौ नि, तिमीलाई तिनीहरुले अँगार र मोसो जस्तै कालो बनाइदिनेछन् । अन्त्यमा तिम्रो धेरै कुरा लुट्ने छन् । त्यसैले लुकाउ कान्छी तिम्रो गहना र सुर्केथैली किनकि कोही लुट्न आउँदैछन् ! विजुली चम्केको गतिमा लुकाउ कान्छी तिम्रो गहना र सुर्केथैली कोही लुट्न आउँदैछन् ।
अमेरिकी कार्यक्रम ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसि)’ प्रतिनिधिले त नेपालीहरुलाई हियाएर गरीबलाई ५९ अर्ब पच्दैन भनिन् रे । अमेरिकीहरुको पिछलग्गु नेपालका कतिपय राजनीतिज्ञ, विज्ञ र अभियन्ताहरु एमसिसि पाउन अमेरिकीहरुको जुत्ताको तलुवा चाट्दैछन् । यसैबीच नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भने कि, बुझ्नेले मात्र एमसिसिबारे बोल्नु नत्र नबुझ्नेले नबोल्नु । नेपालकै एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले भने कि, नेपाललाई धनी बनाउनु छ भने एमसिसि चाहिन्छ । उनले थप भनेका छन, एमसिसि आए नेपाल सिंगापुर बन्छ । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि भने कि एमसिसि नेपालको हितमा छ । एक पूर्व अर्थमन्त्रीले भने कि एमसिसि नबुझ्नेहरु गवाँरहरु हुन् । उनले अरु थप भनेका छन् कि, कुकुरलाई घ्यू पचेन ।
उनले नेपालीहरुलाई कुकुर भने । एक नेत्रीले त एमसिसि नेपालमा ल्याउन हुन्न भन्नेहरुलाई मुखै छाडेर गालि गर्न थालेकी छन् । पश्चिमा राष्ट्रमा रहेका एक नेपाली राजदुतले भने अर्कै बाटो अपनाएर एमसिसि पास गराएरै छाड्नु पर्छ । अनि थुप्रै नेता, अभियन्ता र बुद्धिजिवीहरुले पनि भनेका छन् कि अमेरिकी परियोजना एमसिसि नेपाल आए नेपाल सिंगापुर बन्छ तर सिंगापुर बनाउन त्यहीँका लि क्वान जस्ता देशभित्रैको धनले देश बनाउने दुरदर्शी, राष्ट्रभक्त जाँगरिला र इमान्दार राजनेता चाहिन्छ भन्ने थाहा रहेनछ । सिंगापुर अरुको सहयोगले होइन कि आफ्नै धन, मेहनत, बलबुता र बुद्धिले बनेको हो ।
हेर कान्छी ! एमसिसि एउटा निहु मात्र हो नेपाल छिर्ने अमेरिकाको । अमेरिकाले नेपाल लुट्ने र अरु धेरै उपद्रोह गर्ने छ । नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने एमसिसि नेपाल आएमा नेपाल सरकार र नेपालका सबै सरकारी संयन्त्र एमसिसिको शाखा कार्यालय जस्तै मात्र हुनेछन् । एमसिसिले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा पनि ठड्याउन पाइने छैन । अमेरिकी झण्डा ठड्याउनु पर्नेछ । नेपालीहरुको टाउकामा अमेरिकी सेनाका बुटले कुल्चने छन् ।
कतिपय नेताले चाहिँ भने है, एमसिसिको पक्षमा बोल्नेहरु दलालहरु हुन् । एक प्राध्यापकले स्टाटल लेखे, ‘एमसिसि भनेको अमेरिकाले खान नसकेर छाडेको हड्डिका टुक्रा मिसिएको जुठो भात हो । नेपालका नेता यस्ता रयलपयल हड्डीमा बिक्छन् भन्ने सुँइको पाएपछि अमेरिकाले नेपाललाई उब्रेपाब्रेको जुठो, बासि हड्डी र भात ख्वाउन लागेका हुन् ।’ एमसिसि नेपालको हितमा हुनेगरि पुनरलेखन गरेरमात्र स्वीकार्नु पर्ने धेरै विज्ञहरुले बताएका छन् तर एमसिसिका लागि हाम्रो देश, सत्तासिनहरुले अमेरिकालाई सुम्पने छाँट देखाउँदैछन् । नेपालको संविधानभन्दा एमसिसि माथि रहने भन्ने प्रावधानले यही अर्थ लगाउँदछ ।
एमसिसि पक्षकाहरुको रोइलो टिठ लाग्दो छ मानौै उनीहरुको जायजेथा लुटिएको होस् । उनीहरुलाई यस्तो लागेको हुनुपर्छ मुखैमा आइसकेको अर्बौ डलर उम्कियो । बिकाउहरुलाई यस्तो लाग्दै छ कि हातमा आइसकेको डलर, डलरे जागिर र छोराछोरी, नातानातिनीका लागि अमेरिकाको भिसा, शिक्षा र ग्रिन कार्ड खोसियो । त्यसैले एमसिसि पक्षधरहरु कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । सित्तैमा आएको धन र अवसरहरु चैट हुने ठानेर विक्षिप्त हुँदैछन् । त्यसैले होला एमसिसिको बिरोध गर्नेहरुको टाउका र ढाडमा सरकारले लाठी र बुट बर्साएको छ र कतिपयलाई हत्कडी लगाएको छ ।
हेर कान्छी ! अमेरिकीहरु जहाँ जहाँ पसे ती देशहरु सिंगापुर होइन झिंगापुर बनाइदिएका छन् । अमेरिकी पसेका देशहरुका लाखौँ जनताहरुलाई निर्मम किसिमले मारेका छन् । ती देश र जनताका धन लुटेका छन् । जनताका छोरीचेलीहरुका गरगहना र धन लुटेका छन् । अनि भन्छ्यौ कान्छी ! तिमी एमसिसि आएपछि हामी गहनाले झिरिझ्याट्ट हुनेछौँ । यी सब झुट् हुन् ।
एमसिसि नेपाल पसेमा हेर कान्छी ! तिम्रो तिलहरी, मडवरी, नाकको झम्के बुलाकी, कानमा लाउने टप र रिङ्ग टीका, फुली, शीरविन्दु, चेप्टेसुन, जन्तर, चन्द्रहार, रेजी र हारी अनि औँठी सबै सबै लुटि लानेछन् । तिम्रो थैलीमा रहेका पैसाहरु, पेवापात सबै लुट्ने छन् अनि लुट्ने छन् तिम्रो धेरै कुराहरु । यति मात्र होइन कान्छी हामी नेपालीले मानिल्याएका हाम्रो देश चिनाउने धेरै कुरा लुट्ने छन् । हाम्रा राष्ट्रिय प्रतिकहरु लुट्ने छन् । अमेरिकीहरुले गाई, गौमाता लुट्ने छन् र दिनदिनै हाम्रै अगाडि काटेर खानेछन् । गौमाता, बाच्छीहरु र बाच्छा, बहर अनि गोबर्धन देवताहरु केही बाँकी राख्ने छैनन् । हाम्रो बहुमुल्य सम्पदाहरु लुटिने छन् । बिरोध गर्ने नेपालीहरुलाई बुटले कुल्चने छन् र गोलीले उडाइदिने छन् । हाम्रा घरहरु जलाइदिने छन् ।
एमसिसिप्रति जतिपनि बिरोध भइरहेकाछन्, त्यो अमेरिका आफ्नै कारणले हो । नाथे आधा खर्ब रकम दिनलाई अमेरिकी कार्यक्रम नेपालको संसद, सरकार, कानुन, संविधान र नेपाली जनताभन्दा माथि हुनुपर्ने ? ल नेपालले नै अमेरिकालाई दोब्बर आर्थिक सहयोग दिन्छ, के नेपाली सहयोग कार्यक्रम अमेरिकी संविधान भन्दा माथि हुन दिन्छ अमेरिकाले ?
अमेरिकाले भन्यो रे एमसिसि नेपालले नस्वीकारे आर्थिक नाकाबन्दी लगाइदिन्छु । बरु ढिलो नगरी आर्थिक नाकाबन्दी गरिदेओस् । अमेरिकाले आफ्ना नीति मिल्ने देशहरु र बैंकहरुलाई पनि भनिदेओस् कि नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गर । नेपाल आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्नेछ । दशवटा सिंगापुरभन्दा समृद्ध बन्ने छ चाँडै । अनि नेपाल चाँडै खर्बौ डलर आर्थिक दान गर्ने स्तरमा पुग्नेछ ।
तैपनि नेपाल सरकार, सत्तारुढ दलहरु र विदेशी पैसाका लागि देश दाउमा राख्ने नेता, अभियन्ता र कथित् बुद्धिजिवीहरु जसरी भए नि एमसिसि नेपालमा ल्याएरै छाड्छौँ भन्दैछन् । त्यसैले लुकाउ कान्छी तिम्रो गहना र सुर्केथैली किनकि कोही लुट्न आउँदैछन् ! यदि ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण’ मातहत रहनेगरि एमसिसि आउँछ भने ओ के छ त । होइन त कान्छी ?
कान्छी ! अरु धेरैले जस्तै तिमीले तिम्रो विचार राख्यो, मैले मेरो विचार राखेँ दुबै बराबर । अनि के को लागि तिमी हाम्रो मुया पिरतीको डोरीको पोयो खुस्काउन खोज्दैछ्यौ ? अहिलेलाई यत्ती । तिमीलाई औधी मुया गर्ने तिम्रो उही लोर्के कान्छा ।’
Previous articleरेडपाण्डा संरक्षणका लागि कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप
Next articleआज विश्वकर्मा पूजा एवं वास्तु दिवस